Home peeji nke • elingwa nlereanya
———- PEEJI NKE ———-
Atherdị ihu igwe
Onodi: na a nlereanya site A ka Z
Ule na ihe ngosi
Osisi nke ọrụ agwụla
Mee N'onwe Gị: Mee N'onwe Gị Makingkpụrụ Ime
---- OPlọ ahịa ----
BLOG: NK MODM FROMTA SITE NA NT.
Ngalaba bulogi: nkuzi ihe nlere, nkuzi, ntuziaka, ihe mmasi.
TAlọ ahịa RETAIL: MODLỌ KWES WORLDR WORLD WORLDWA ngwaahịa
Lọ ahịa ụlọ ahịa na onyinye anyị na-enye: ngwaahịa kachasị mma maka ndị na-ere ahịa.
EBE EGO EGO
Ndepụta ụlọ ahịa gọọmentị na ndị na-ere ahịa na Modeller World na-enye
Iji mee ka ọ dịkwuo mfe ịnyagharịa na blọọgụ, a na-achịkọta ndenye na ya dị ka ngọngọ ndị a:
Ngosi nke usoro nke unyi na akara nke uwe na ihe nlereanya. Na-arụ ọrụ na ihe nlereanya ahụ site na ọkwa nke egwuri egwu maka imepụta echiche efu nke eziokwu.
Ihe niile gbasara isi ọrụ ọrụ. Banyere gluing, nhazi na eserese, dị ka isi anyị si kwuo: imepụta ihe site na ncha.
Mmekọrịta nke ọrụ na ihe nlereanya site na mbido nke mbụ ruo na gallery ikpeazụ.
Ngalaba blọọgụ maka isiokwu isiokwu: ogidi, akụkọ, ajụjụ ọnụ. Akụkọ sitere na ịme ngosi uwe. A bit banyere agha.
Ihe ngosi nke igbe tupu gluing, ule nke Chemicals na ihe nlere. Ihe anyị ji aka anyị, n'ụzọ ziri ezi ma ruo n'isi.
Galili ikpeazụ nke ọrụ agwụla. Thedị niile m rụworo na nke mezuru nke ọma nwere ebe na ngalaba a.
Kedu ihe ọhụụ na Worldlarski World. Ihe niile gbasara ihe na-agbanwe ma na-eme na ibe weebụ, kamakwa gbasara akụkọ na ọkwa ahịa.
N'akụkụ a, anyị na-ewetara obere ngwa, akụrụngwa na ngwaọrụ bara uru maka ndị na-eme ihe nkiri na ndị na-eme N'onwe Gị.
Ndenye blog kacha ọhụrụ
Kedu ihe anyị na-ede ugbu a banyere, ihe anyị na-arụ ọrụ:
Mmanụ Unyi Wash 'ami acc. nna ukwu Mirek Serba
mmanụ Wash ndị a bụ ngwaahịa anyị na-anya isi nke ọma. Ọnye na-bụ Mirosław Serba na ihe ngosi nke Polish, ọ dịghị mkpa ịkọwa. Onye mara mma nke ukwuu, onye na-eme ihe ngosi, na onye nlereanya nwere nnukwu [...]
Nyochaa site na Grot Orderly
Ekele dịrị onye edemede ahụ, anyị na-akpọkwa gị ka ị soro ya na mgbasa ozi: KWURU M: https://paypal.me/Zigmunth PATRONITE: https://patronite.pl/GrotOrderly SKLEPIK CUPSELL: http: //grotorderly.cupsell. pl / DISCORD LINK: https://discord.gg/jxzq2rx PAGE NA FACEBOOK: http://www.facebook.com/GrotOrderly BLOG ON BLOGSPOT: http://www.grotorderly.pl
Ihe nkiri ohuru na uzo Agtom
Taa, n'ime abalị, vidiyo ọzọ na ọwa Agtom wuru site na iwu nke tank 7TP - IBG 1: 35, akụkọ sitere na ụlọ IBG. Tomek gosipụtara usoro nke itinye agba wash ntụ ntụ. Daalụ maka ịhọrọ [...]
LEE NZI NILE NA BLOG
Ntinye kachasị ewu ewu
Lelee ihe ndị debanyere aha anyị na-agụ banyere weebụsaịtị anyị:
Itinye pigments na ụdị
ihe omuma compendium
Esi mee ka upholstery na ihe nlereanya Otu esi eme akwa upholstery na ihe nlere
ogbo nchara Usoro - dị mfe ma dị irè!
Ndị nhazi ihe omume si HobbyZone
kwesịrị ya, ọ bụghị ya kwesịrị ya? - Nyocha
Nchara na muffler
esi mee ngwa ngwa na ngwa ngwa iru mmetụta na-adọrọ mmasị na ụdị ahụ
Ike na otu
You nwere akaụntụ Facebook? Soro ndi otu anyi Frog na ihu igwe!
Nọ n’obodo bụ nnukwu ohere iji gosi onwe gị, chọọ mmụọ nsọ ma chọọ ndụmọdụ. Mee ndị ị ga-ahụ n'anya, soro ma sonyere mkparịta ụka. Cheta na onye obughi ju ajuju ajuju amaghi. Anyị na-ahazi asọmpi cyclical na ihe nrite na World Modeling Cup Championship na otu ahụ.
Nke a bụ ihe ha kwuru gbasara anyị:
Ekwadoro m ya. A mpempe ezigbo ọrụ, ọkachamara ndụmọdụ, atụmatụ atụmatụ na veranda mara mma na ọkwa ọ bụla nke ịme ngosi uwe.
Nkwupụta si Facebook
Kachasị mma na PL! Weebụsaịtị, ụlọ ahịa, ezigbo onyinye. Ekwadoro m ịbanye n'òtù ahụ, ọdịbendị dị elu.
Otu ndi mmadu nwere mmasi mara nma
Okwu ole na ole banyere onye edemede
Makingme ihe nlere anya bu oru nke riri m aru site na nwata. M na-etolite agụụ m oge niile nke mere ka ụwa Modelarski bụrụ: ụwa ebe m nwere ike ikpokọta ihe omume ntụrụndụ m na ndụ m. Ebe mma dị mkpa na mgbaghara enweghị isi.
Onye nwe larslọ ọrụ Modelarski Świat
More banyere ụlọ ọrụ
Anyị na-arụ ọrụ 09-17 na oge UTC + 01: 00 / UTC +02: 00
Kọntaktị mba ụwa
Zipu ozi-e na adreesị na-esonụ:
Fanpage anyị Fb
World2022 Model. Wuru site na iji WordPress na Na-atụle Okwu